Sagalee Qeerroo:Godina Baalee Aanaa Gindhiiritti Qeerroo fi Qarreen hiriira bahuun pp balaaleffatan. - Kichuu
[ September 26, 2020 ] Dhalattootni Walaaytaa Humna Waraana Abiy keessa jiran Akkuma jiraniin Saba isaanii Walaytaa waliin dhaabbataa jiru.	Amharic
[ September 26, 2020 ] Ethiopia: Criminal Charges Against 5,728 Individuals	Africa
[ September 26, 2020 ] Naannoon amhaaraa ayyaana masqalaa sababbeefachuun hattoota naannicha keessatti hidhamanii turan namoota 815 bilisaan baase.	Amharic
[ September 26, 2020 ] Ethiopia’s Jawar Mohammed: From Abiy ally to terror trial	Africa
[ September 26, 2020 ] Artisti Dr Ali Birraa fayyanii gara mana isaaniitti galan	Videos
HomeAfaan OromooNewsSagalee Qeerroo:Godina Baalee Aanaa Gindhiiritti Qeerroo fi Qarreen hiriira bahuun pp balaaleffatan.
Sagalee Qeerroo: Amajjii 27/2020
Godina Baalee Aanaa Gindhiiritti Qeerroo fi Qarreen hiriira bahuun pp balaaleffatan.
Godina Baalee aanaa Gindhiir keessatti guyyaa har’aa mootummaa bakka bu’uun imaammata paartii PP leenjisuu namoota deeman irratti jiraattotni Magaalaa Gindhiir Qeerroo fi Qarreen waliin tahuun namoota acho deemanitti hiriira bahuun akka isaan karaa dhufanirra deebi’anii galan godhaniiru.
Oromoo lixaa fi kibbaa Oromiyaa keessatti ajjeesaa yerootti nu waliin mariiyattan hon qabdan jechuun sagalee mormii dhageesisaa ummata Ajjeefamaa jiruuf sagalee tahaa oolaniiru.
Namootni PP bakka bu’uun gara sana imalanis waraanaan ajjabamanii magaalaa sana lakkisuu akka dandahan maddeen keenya nuuf gabaasaniiru.
Barattoonni Yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa ari’aman yeroo ammaa waajjira ABO jiru.
Namoonni Daldalaa Lama Naannoo Uummattoota Kibbaatti Ajjeefamuun Gabaasame
WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)—Namoonni daldalaa lama magaalaa Teeppii godinaa Shaka naannoo uummattoota kibbaa keessatti ajjeefamuun gabasamee jira.
Haleellaa suukaneessaan obbolaa lama kanneen naannoo Amaaraa irraa ta’an irratti raawwate, qaama haleellaalee walitti aansuun garee hin beekamin naannoo sana keessa sosso’aniin walitti aansuun geggeessamee ti jechuu dhaan jidraattonnii fi angawoonni naannoo VOAf ibsaniiru.
Reeffi obbolaa lamaanii Goojjamitti ergamuun sirna awwaalcha isaanii raawwatamee jira jedha Yonaattan Zebdiyoos Hawaasaa irraa.